४६ सांसदको गाँजा खोल्ने माग कति जायज? – मिथिला दैनिक
मिथिला दैनिक १८ माघ २०७६, शनिबार ०८:०८
नेपालमा लागुऔषध मानिने गाँजा ‘वैधानिक’ बनाउन सत्तारूढ नेकपाका ४६ सांसदले बुधबार सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
सांसद विरोध खतिवडाले ‘अमेरिका, क्यानडा, जर्मनीसहित ६५ देशले वैधानिकता दिएको’ उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि खोल्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
आयुर्वेद विज्ञानले ‘गुणकारी’ मानेको जडिबुटी किन, कसरी र कसको दबाबमा प्रतिबन्धित भयो भनेर पनि लेखेका छौं। नेपालको हावापानीमा प्राकृतिक रूपले नै फस्टाउने गाँजाबाट व्यावसायिक लाभ लिन नसके हाम्रो मौलिक ज्ञानको फाइदा लिएर विदेशीहरू अघि बढ्छन्, हामी जहाँको त्यहीँ रहन्छौं भनेर सचेत गराएका छौं।
विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले गाँजाको स्वास्थ्य उपयोगिता प्रमाणित गरेको छ। कतिपय दीर्घरोग निको पार्न अचुक ओखतीको काम गर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। खासगरी ‘ग्लाउकोमा’ भनिने आँखारोग, मुर्छा पर्ने, अनिद्रा, अल्जाइमर्स, शारीरिक पीडा, अपचजस्ता रोग उपचारमा गाँजा सहयोगी हुने अनुसन्धानले देखाएको छ।
गाँजालाई आयुर्वेदमा ‘विजया’ भनिन्छ। निद्रा नलाग्ने, नाकबाट पानी बगिरहने, शीघ्र स्खलन, झाडापखाला, अत्यधिक पीडा, मानसिक समस्याजस्ता रोग निको पार्न गाँजा (विजया) को औषधि प्रयोग हुँदै आएको सिंहदरबार वैद्यखानाको रेकर्डमा देखिन्छ।
गाँजाको कण मिसाएर तयार पारिने ‘लक्ष्मीविलास रस’ नाकबाट पानी बग्ने रोगमा अचुक ओखती मानिन्छ। अनिद्रा र उच्च रक्तचापका बिरामीलाई दिइने ‘सर्पगन्धा’ मा पनि गाँजाको कण हुन्छ। मानसिक र डिप्रेसनका बिरामीलाई यसैबाट बनेको ‘मोदनानन्द मोदक’ दिइन्छ।
बिरामी लठ्याउन वा पीडा कम गर्न ‘एनेस्थेसिक’ वा ‘एनाल्जेसिक’ औषधि नहुँदा सयौं वर्षदेखि गाँजा प्रयोग हुँदै आएको थियो। क्यान्सर बिरामीलाई गाँजा मिसाएको औषधि दिँदा पीडा कम हुनुका साथै निराशाबाट बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ।
त्यस्तै, ‘रामबाण रस’ वा ‘रातोबरी’ भन्ने औषधिले झाडापखाला निको पार्छ। यी दुवैमा गाँजाको कण हुन्छ।
‘जर्नल अफ सेक्सुअल मेडिसिन’ मा गत वर्ष प्रकाशित रिपोर्टले गाँजा सेवनबाट मान्छेको यौन क्षमता बढ्छ भनेर लेखेको छ। अमेरिकाको स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले गाँजा र यौनशक्तिबीच सम्बन्ध प्रमाणित गरेका हुन्। त्योभन्दा धेरैअघि सिंहदरबार वैद्यखानाले नै शीर्घ स्खलन रोक्न गाँजाको कणयुक्त ‘पूर्णचन्द्रोदय रस’ र ‘भोग सुन्दरी’ नामक औषधि उत्पादन गर्थ्यो।
उनका अनुसार, औषधिका रूपमा गाँजा प्रयोग दुई किसिमबाट हुन्छ। कुनैमा गाँजाको छिटा मात्र हानिन्छ। यसलाई ‘भावना प्रक्षेपण’ भनिन्छ। गाँजाको बीउबाट सोझै ओखती पनि बनाइन्छ।
‘गाँजाका पात पिनेर, बीउ घिउमा भुटेर वा दूधमा पकाएर पनि औषधि बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्यतया अन्य आयुर्वेदिक सामग्रीमा थोरै गाँजा प्रशोधन गरी ओखती बनाउने चलन छ।’
यति हुँदाहुँदै गाँजा स्वास्थ्यलाई पूरै ‘फाइदाजनक’ छ भन्ने होइन।
‘पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण चिज अमृत पनि हुनसक्छ, विष पनि,’ आयुर्वेद क्याम्पस, कीर्तिपुरका प्राध्यापक डा. डिबी रोका भन्छन्, ‘कुनै पनि तत्व मात्रा, उद्देश्य र प्रयोग मिलाएर खायो भने औषधि हुन्छ भन्ने आयुर्वेदको मान्यता हो। गाँजा त्यस्तै हो।’
‘सरकारले आवश्यकता महशुस गरे विश्वविद्यालयका आयुर्वेद प्राध्यापकहरूसँग सल्लाह गर्न सक्छ। हामी यसका फाइदा–बेफाइदा केलाएर बताउन सक्छौं। प्रशोधनको तह र परिमाण खुलाएर कुन–कुन औषधिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी सिफारिस गर्न सक्छौं,’ रोकाले भनेका थिए।
गाँजालाई मान्छेको दैनिक व्यवहारमा पनि उपयोगी मानिन्छ। नेपालको मध्यपश्चिम पहाडमा यसले दाउरा आपूर्ति गर्छ। यसको चोपबाट चरेस उत्पादन हुन्छ, जुन महँगो हुनाले ‘ब्ल्याक गोल्ड’ भनिन्छ।
गाँजामा पाइने रसायन स्याम्पू, कफी, शरीरमा लगाउने तेल लगायत थुप्रै घरायसी सामग्रीमा प्रयोग हुन थालेको छ। ‘सिबिडी’ (क्यानाबिडिओल) भनिने यो रसायन गम्मी बियर्स (एक प्रकारको चकलेट) देखि कुकुर, बिरालोको खानामा समेत प्रयोग हुन्छ। जनावरको दुखाइ कम गर्न यो सहयोगी मानिन्छ।
गाँजाका धेरै प्रजाति छन्। मुख्य दुई प्रजातिको खेती हुन्छ। एउटामा ‘टिएचसी’ (टेट्राहाइड्रोक्यानाबाइनोल) उच्च हुन्छ। यसको सेवनले झुम्म बनाउँछ। गाँजा खाने र औषधि बनाउने यही प्रजातिको हो।
यही बिहीबार सार्वजनिक ‘गाँजा बजार अपडेट, २०२०’ को रिपोर्टअनुसार वैधानिक गाँजाको बिक्री सन् २०१९ मा करिब ४६ प्रतिशत बढेको छ। करिब १५ अर्ब डलरको बिक्रीमा क्यानडा, क्यालिफोर्निया र म्यासाचुसेट्सको हिस्सा धेरै छ।
तराईका बारा, पर्सा, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी तथा मध्य र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा नगदे बालीका रूपमा गाँजा उत्पादन हुन्थ्यो। दोस्रो विश्वयुद्धकै समयदेखि नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित थियो। ‘हिप्पी’ युगको सुरुआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा खान ‘गोरा साधु’ हरूको घुइँचो लाग्थ्यो। त्यति बेला यहाँ ३० वटा जति गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए।
त्यस बेला राष्ट्रसंघको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ ले गाँजालाई हेरोइनजस्तो कडा लागुऔषधको दर्जामा राखेको थियो। आफ्नो नीतिअनुसार गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन सहयोग नगरेको भन्दै राष्ट्रसंघले नेपालको चर्को आलोचना गर्‍यो। एसिया र पश्चिमी देशमा अझै प्रतिबन्धित नभएको गाँजा तुरून्तै प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दियो।
खासगरी हिप्पी कालमा काठमाडौं छिरेका कतिपय अमेरिकी ‘लागुऔषध सेवन गर्न’ यतै बस्न थालेपछि अमेरिका चिन्तित थियो। र, उसकै दबाबले नेपालमा प्रतिबन्ध पनि लाग्यो।
‘गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो परम्परागत ज्ञान विदेशीले अपनाउन थालिसके। भोलि हामी उनीहरूले नै बनाएका औषधि किन्छौं, हाम्रो ज्ञान त्यसै मासिन्छ,’ राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका अध्यक्ष डा. ऋषिराम कोइरालाले भनेका थिए, ‘यो अवस्था आउनुअघि नै हामीले आफ्नो परम्परागत ज्ञान सुरक्षित राख्नुपर्छ।’
प्रहरीले ‘विशेष सुरक्षा योजना’ का नाममा गाउँ–गाउँ गएर गाँजा खेती फडानी गर्छ। नगदे बालीका रूपमा लगाइएका गाँजा काटकुट पारेर जलाइदिन्छ। ठूलो परिमाण ओसारपसार गर्ने कारोबारी मात्र होइन, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बोक्ने पनि पक्राउ पर्छन्। गाँजा खेती गर्न नपाइने कानुनले गरिब जनतालाई दुःख दिएर झनै गरिब बनाएको खतिवडाको भनाइ छ।
उनले बुधबार दर्ता गराएको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘नेपालको भू–भाग प्राकृतिक रूपले नै गाँजा खेतीका लागि अब्बल छ। अरू देशले जस्तै किसानको जीवनस्तर उकास्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि अहिलेको कानुन परिमार्जन गर्न र सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा तोकिएको क्षेत्रमा वैधानिकता दिन ढिला भइरहेको छ।’
‘सरकारले तुरून्तै यसबारे कदम चालोस्,’ उनले भने। @setopati